beautiful umfazi - Ividiyo incoko ye-Italy
Nayiphi na inginginya abo unxulumano wam Carl
Mna bazive ngathi esi sisiqalo into ngenene okulungileyo. Ndiza divorced, kodwa ngoku ndifuna ukuya kuhlangana umntu othe a uluvo humor, umntu lowo unako ukwenza uziva okulungileyo yonke imihlaAbazithandayo ukuze nakekela kum ngoko ke ndifuna ukuva okulungileyo. Iincoko, intimacy Akukho namnye oku kuphumeza kum umyeni wam. Thina asikwazanga kuphila apha kakhulu ixesha elide, kodwa kunye omtsha umsebenzi kwi omkhulu inkampani, eneneni, ukuba ndinako ngoku ndigoduke kwaye dlala housewife okanye kuba waitress, andiyazi.
Kengoko bathethe malunga nayo, kwaye thina musa ukwenza nantoni na ongomnye.
Ndifuna ukuba abe isohlwayo kuba lonke ixesha ndifuna ukuchitha apha kwaye ngoku, kwaye ngoku ithemba ngu ukuba uza ndibonise ukuba uphelelwe kanjalo isohlwayo. Nisolko a guy, kwaye nani malunga umntu a divorced umfazi ngathi kum ifuna ukuba badibane nabo. Xa ufuna relax ekhaya, ingaba usoloko kuba kwenye indawo ukuya? Kuba mna, lo ngunyana wam igadi, olugqibeleleyo ukuba ndifuna ukufumana phandle le guy kwaye abe yedwa kunye nam. Ndifuna ukwenza entsha abahlobo apha, kwaye ndiyathemba ungenza kuba okulungileyo umhlobo kum? Ndiyathemba musa khumbula ukuba andikho a lohlobo isiswedish umfazi othe blonde iinwele okwesibhakabhaka amehlo. Ndidinga umntu abo appreciates kum. Andikhathali apho ufaka, kodwa mna kufuneka admit kwaye ndithi lanto ndine into kuba isiswedish abantu. Ndicinga ukuba isiswedish i-abantu bakho ngoko ke beautiful kwaye, ozolisayo, kwaye yintoni mna appreciate, kwaye amazinyo. Akunyanzelekanga ukuba unayo nayiphi na amava besebenza oku haha, kodwa ndithanda ukubona indlela sifumana ukwazi ngamnye ezinye kwaye ke kuya ngaphandle kunye kwi okulungileyo mini. Uvumelekile ukuba umntu lowo ufuna settle phantsi kwaye nokwakha ubomi kunye.
Kufuneka livumile ukuba ndine abantwana ukusuka edlulileyo budlelwane.
Ndingumntu romanticcomment ngubani kulula laugh ngalo.
Ndiyathemba uza kubhala kum.
Akukho iziphakamiso, enkosi. Ndijonge kuba umntu abo seriously ufuna ukwenza i-ukuqeshwa nam! Ndidinga umntu olungileyo kwaye zalo lonke udidi. Mna akasoze abe kunye umntu olilungu rhoqo blurry, phantsi phezulu kwaye nomsindo.
Ndinako cook kwaye yenza sandwiches kakuhle kakhulu
Intliziyo yakho ngu uhlobo nangamaxhala malunga nabanye abantu. Uvumelekile ukuba honest kwaye unyanisekile. Akukho mcimbi apho ukhe ubene ukususela, ndifuna ukuba ahlangane kum. Uvumelekile ukuba kanjalo omnye ngenxa ndijonge kule ndawo kuba umntu olilungu ezinzima, abo ifuna ukuya kuhlangana kum, ukuba umhla kum kwaye ngethemba kuwa ngothando. Enye ukuba siphila icala yi-icala, kodwa hayi necessarily. Kufuneka thembeka ngokwakho, uthando kuwe, kwaye ngoko uya kuba impumelelo. Mna Ndiza divorced, kwaye mna, nento yokuba ngathi ukuhlangabezana umntu lowo uyakwazi ukuchitha i-evenings kunye nam. Umntu esabelana uyakwazi kuba okulungileyo thetha, kukuba nani? A imfundo kufuneka ujonge kuba into ezinzima. Mna ngenene kufuneka ahlangane umntu lowo unako share ubomi bam nam. Ngoko uyakwazi, ukusukela ukuba ukhe ubene ngokumema kum ukuba mnandi sangokuhlwa ngoko ke sinako qala into amazing.
Loyal, honest, enyanisekileyo, romanticcomment, ebukekayo, hardworking, agciniwe, fun, loyal, loyal kwaye reliable.
A guy nge funny ndinovelwano. Akunyanzelekanga ukuba ube ixesha kuba imidlalo. Musa inkunkuma ixesha lam. Masizame kuba abahlobo kwaye uyakuthanda ngamnye enye. Nisolko lonely nje ngathi kum, akhonto okungalunganga hitting abanye, ndiza nje abahlobo nakanjani na. Manditsho ndiyazi ukuba ucinga ukuba ndiza anomdla. Ndiza ukuqinisekisa ukuba kukho izinto ezininzi abantu abaya kufuneka abahlobo, ngolohlobo kum. Uyakwazi kuba cambrelle A ezinzima umntu lowo ufuna beka phantsi ngaphandle kunye nam. Umntu olilungu kanjalo ikhangela ilungelo guy kwaye ifuna ukuba ube exclusive. Kwenu akukho mfuneko yokucinga omele kuba omnye bezimbiwa ubunzima-mthamo. Kuba ngaphakathi wam pants hayi ngqo.
Umntu olilungu kanjalo ikhangela uthando kwaye loneliness.
Kufuneka ube uqinisekile kwaye ingekuko ukuba neentloni.
Ndiza indlela ozayo kuni.
Kufuneka ube vula ukuba nayo yakho girlfriend.
Uza kuba fashionable kwaye charming, polite kakhulu ambitious kwaye purposeful.
Osikhangelayo uthando njengathi ndinguye, kwaye kufuneka ube njengoko elinye njengoko ungumnini gca. Musa kuba ukuba neentloni, ndiyathemba ukuba bonwabele adventures! Ndim ke lonely, kwaye ndifuna ukuba undinike kunye intimacy kwaye ezininzi fun izinto ifomu yexesha elizayo impressions! Akukho umcimbi lowo ungumnini okanye ukuba ucinga ntoni awuqinisekanga, ungummi emangalisayo umntu. Ndiza kuba ninoyolo ukuba mna ayikwazanga ukufumana ukwazi wena mhlawumbi yenza wena kuwa ngothando kunye nam.
Nisolko nje ngathi kum, kwaye ucinga ukuba uthando kufuneka wasebenza kwi zesilivere platter? Ngoko ke, ndicinga ukuba ukhe apha kunye ubuxoki uthando.
Hayi, yintoni wena esithi? Mhlawumbi nento yokuba ufuna pack phezulu kwaye fumana into into funny?"Uyakwazi bonwabele adventures kwaye ukuhamba! Mna bakhetha kuba ubonile ukufumana umdla izinto zikakesare iselwa icimile kwaye abantu abaqhelekileyo. Umhlobo wam yi-ekhaya yedwa, kwaye mna anayithathela kokuba ngokwaneleyo! Nceda vumelani undazise ukuba ufuna ukuba uyonwabele nam! Ungafumana amashumi izinto kunye nam kwixesha elizayo. Ndiza umhlobo abo ayi funny kwaphela, ngoko ke ndandicinga kuni kwaye njani thina ayikwazanga ukufumana ezininzi fun izinto kunye. Uyakwazi nkqu kuphuma kwaye kuba okulungileyo sangokuhlwa! Ngaba kukho umntu ubomi bam, mna kufuneka ukuba wenze kum ukuva ndonwabe kunye nodibanisa. Kuba wabelana i-guts ukuba admit kum okokuba mna andinaku zikhathalele ngokwam? Kufuneka kubekho umntu othe likes ukubona kwam cheating kwi boyfriend yam! Yena akuthethi ukuba siyazi okokuba mna, betha, komnye, kwaye ngoku, kwesinye isandla, mna, nento yokuba ngathi ukuhlangabezana indoda apha. Ufuna kuba loo mntu? Mna kuba akukho ngxaki abajikelezayo! Kufuneka ube ngumntu lowo uya kundinika ezininzi adventures! Mna anayithathela ukuba ujonge kwi-pub, kodwa ke ayisosine wam incasa! Ndiyathemba ungatshintsha wam loneliness kwaye ingaba ezininzi mnandi izinto kunye nam.
Isi-Italian - ICQ Incoko-Intanethi Incoko Amagumbi
Αίθουσα αναψυχής COM: Πύλη για τυχαίους περιπάτους
esisicwangciso-mibuzo roulette ubhaliso girls Chatroulette engeminye ividiyo incoko amagumbi nge-girls free online seriously get ukwazi Chatroulette-intanethi ividiyo incoko kuphila ividiyo incoko Dating esisicwangciso-mibuzo roulette kubekho inkqubela-intanethi ngaphandle ubhaliso ukuphila ividiyo incoko get ukwazi isixeko